Home News Qarax xoogan oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qaraxyo Miino ah oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Sidda ay MOL u xaqiijiyeen goobjoogayaal Labo Qarax oo ah Nooca dhulka lagu Aaso ayaa ka dhacay degaanka Daarulsalaam ee Muqdisho.
Qaraxa Koowaad waxaa lala eegtay Gaari ay saarnaayeen Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana ku dhaawacmay 3 Askari.
Qaraxa labaad ayaa sidoo kale ka dhacay Wadada Jeneraal Daauud, waxaana la sheegay in uusan geysan wax Khasaaro ah, uuna ka dhacay meel wadada Hareerteeda ah.
Goobjoogayaal ayaa sidoo kale warbaahinta u xaqiijiyay in Qaraxyadda ka dib Wadada Generaal Daauud ay yimaadeen Ciidamo badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa wadda Baaritaano ku aadan Qaraxyaddaasi lagu Aasaasay wadada dhinaceeda.
Previous articleUrurka Al Shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo dagaal xooggan uu ku dhex-maray Gobolka Sh/hoose
Next articleGud. Rugta Ganacsiga Maxamud C. Gabeyre oo hanti ka dhacay dad shacab ah (Video)